Mogadishu Journal » Maxkamada gobolka Banaadir oo maanta xukunno isugu jiray xarig iyo dil ku riday eedeysanayaal la horkeenay
Mjournal : — Maxkamada gobolka Banaadir ayaa maanta la horkeenay ilaa 15 eedeysane oo loo heystay danbiyo isugu jiray dil, kufsi iyo waliba dhac, waxaana ay maxkamadu mid mid u dhageystay dacwadaha kala duwan ee lagu soo eedeeyay mid walba oo ka mid ah eedeysanayaasha.
Waxaa maxkamada ka hor aqriyay fal danbiyeedyada loo heystay eedeysanayaasha ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Max’ed Xassan Nuur, isaga oo mid walba oo ka mid ah sheegay in danbiga loo heysto.
Intaa kadib waxaa bilaabatay dood dheer oo dhaxmartay qareenadii difaacayay eedeysanayaasha, xeer ilaaliyaha maxkamada iyo waliba danbi –baarayaasha, waxaa ugu danbeyntii lagu dhawaaqay go’aanka maxkamada.
Maxkamada ayaa saddex ka mid ahaa danbiyalayaasha ku xukuntay dil toogasho ah, kadib markii lagu hellay in ay si bareer ah u dilleen muwaadiin kale oo Soomaaliyeed, waxaana la sheegay in mid ka mid ah uu dillay nin qabay xaas ay horay u kala tageen.
Sidoo kale waxaa ay maxkamadu xukunno kala duwan oo xarig ah ku riday qaar ka mid ah danbiilayaasha lagu hellay dacwadihii lagu soo oogay, halka mid ka mid ah dadkii maxkamada la horkeenay la sii daayay, kadib markii la waayay cadeymo ku fillan danbiga lagu soo oogay.
mjournal January 18, 2014 at 2:50 pm Log in to Reply